Ixabiso elingakanani lomatshini wokucoca omncinci omancinci
Umatshini wokucoca omancinci omncinci, kuthekani malunga nemali nganye evulekileyo abacoca abacocekileyo ngxaki yobudlelwane beligi. Ufike kwixesha lokuphengululwa konyaka kuninzi abafundi beekholeji bakhetha ukurhweba, kodwa baxhamla kwiinkampani zokucoca ezinomileyo abaziqondiyo, abakwaziyo ukuba le nxalenye ihlambulula njani i-cleanersers, kufuneka i-ENEJEAN ihlale ihlambulule uMnu Zhu nkcazelo ekhethekileyo kuwe:
Kuyaqondwa ukuba kwishishini lokucoca otyomileyo, inxalenye yecandelo labafundi beekholejini, baye bahamba nenani lemizamo yabo endleleni yokuvula ivenkile ukwenza imali lula.
Isikolo esiphantsi kwesikolo sokugqiba esiqinileyo, ngokusweleka kwemali, kwinkqubo yotyalo-mali, zixhalaba ngakumbi kuneendleko zotyalo-mali. Abafundi beeKholeji \_'zokuqeshisa umsebenzi oomileyo ukucoca ivenkile yokuthengisa, kukho ezimbini ezibalulekileyo ngokweendleko zokutyalomali, i-franchise, enye iindleko zezixhobo.
Ngokuqhelekileyo, uhlobo olumkileyo lokucoca i-franchise brand lufuna iimfuno eziqinileyo ngokujoyina umrhumo, kodwa iindleko zempahla yokucoca eyomileyo ngaphandle kwemithetho echanekileyo. Emva kwakho konke, ubukhulu bendawo yokucoca ivenkile yokucoca i-franchise ihlukile, ukhetho lwakho lwezixhobo ezahlukeneyo zokucoca oomileyo, isethi epheleleyo yokucoca iindleko zezinto zokusebenza azifani.
Kodwa i-ENEJEAN isethi yezixhobo ezisisiseko: kuphela i-28800 kuphela inokulingana neoli ecocekileyo yicocekileyo, i-washing machine, i-tableing ironing table, i-generator ye-steam, i-iron iron, njl.
I-ENEJEAN isistim sokuhlamba i-franchising ecocekileyo ineempawu ezilandelayo:
Ukukhanya okuphazambileyo, ukumelana nokutshabalalisa, ukunyuka okungekho ngaphantsi kwaye akukho monakalo wendwangu, ubomi benkonzo yomshini ixesha elide, lixhotywe ngensimbi engenasinxibe yangaphakathi yesikhuselo somnyango wokhuseleko lokuvala, ngaphandle kwendawo yokuvala umgcini wesikhombi ifakwe kwisixhobo sokukhutshwa kombane, ukukhuseleka nokuthembekileyo.
Inqaku lokugqibela: Ixabiso lokucoca ixabiso elibi...
Inqaku elilandelayo: Umshini wokucoca oomileyo onok...